Ny Sabata Kristiana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Mino ny WKG > Ny Sabata Kristiana
Ny Sabata kristiana dia fiainana ao amin’i Jesoa Kristy, izay ahitan’ny mpino tsirairay fitsaharana marina. Ny Sabata andro fahafito isan-kerinandro nandidiana ny Isiraely tao amin’ny Didy Folo dia aloka manondro ny tena zava-misy marina momba an’i Jesosy Kristy Tompontsika sy Mpamonjy antsika ho famantarana ny tena zava-misy marina. (Hebreo 4,3.8-10; Matthew 11,28- enina ambin'ny folo; 2. Mosesy 20,8:11–; Kolosiana 2,16-17)
Ankalazao ny famonjena ao amin'i Kristy
Ny fiankohofana no valin-tenantsika amin'ireo asa soa nomen'Andriamanitra ho antsika. Ho an'ny zanak’Israely, ny fifindra-monina, ny traikefa nifindra tany Egypta, dia teo afovoan’ny fotoam-pivavahana - izay nataon’Andriamanitra ho azy. Ho an'ny kristiana dia ny ivon'ny filazantsara no ivon'ny fanompoana - izay nataon'Andriamanitra ho an'ny mino rehetra. Amin'ny fotoam-pivavahana kristiana dia mankalaza sy mizara amin'ny fiainana, ny fahafatesana ary ny fitsanganan'i Jesosy Kristy ho famonjena sy famonjena ny olona rehetra isika.
Ny endrika fivavahana nomena an'i Israely dia natao manokana ho azy ireo. Nanome modely ho an'ny zanak'Israely tamin'ny alàlan'i Mosesy ny fotoam-pivavahana izay afaka manampy ny zanak'Israely hankalaza sy hisaotra an'Andriamanitra noho ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra ho azy ireo rehefa nitondra azy nivoaka avy tany Ejipta izy ireo ary nitondra azy ho any amin'ny tany nampanantenaina.
Ny fanompoam-pivavahana Kristiana dia tsy mitaky fepetra mifototra amin'ny zavatra niainan'ny Isiraely tamin'ny Testamenta Taloha niaraka tamin'Andriamanitra, fa kosa mamaly ny filazantsara. Raha ampitahaina amin’izany, dia azontsika atao ny milaza fa ny “divay vaovao” ao amin’ny Filazantsara dia tsy maintsy arotsaka ao anaty “siny hoditra vaovao” (Matio. 9,17). Tsy natao handraisana ny divay vaovaon’ny filazantsara ny “fantsona tranainy” an’ny fanekena taloha (Hebreo 1.2,18- iray).
Ny fiankohofana israelita dia ho an'ny Isiraely. Naharitra hatramin'ny nahatongavan'i Kristy izany. Nanomboka teo dia nanambara ny fivavahan'izy ireo amin'ny fomba vaovao ny vahoakan'Andriamanitra, mamaly ny vaovao vaovao - ny zavatra vaovao lehibe izay nataon'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy. Ny fiankohofana kristiana dia ny famerenana ny fandraisana sy ny fandraisana anjara amin'ny vatan'i Jesosy Kristy. Ny singa tena lehibe dia:
Fankalazana ny Fanasan'ny Tompo, antsoina koa hoe Eokaristia (na Thanksgiving) sy Komonio, araka ny nandidian'i Kristy antsika.
Famakiana andinin-tsoratra masina: Mamerina sy mandinika ireo fitantarana momba ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fampanantenany isika, indrindra fa ny fampanantenan'i Jesoa Kristy Mpamonjy, izay mamelona antsika amin'ny Tenin'Andriamanitra.
Vavaka sy hira: Mandeha amim-pahatokiana ny fivavahantsika amin'Andriamanitra isika, manenina amin'ny fahetren-tena ary manome voninahitra sy mankalaza Azy amin'ny fankalazana amim-pifaliana sy fankasitrahana.
Mifanaraka amin'ny atiny
Ny fotoam-pivavahana kristiana dia miorina amin'ny atiny sy ny dikany fa tsy amin'ny fitsipi-pomba na ara-nofo. Izany no antony anaovana ny fivavahan'ny kristiana amin'ny andro manokana amin'ny herinandro na vanim-potoana voafaritra. Tsy voatery manana andro na vanim-potoana manokana ny kristiana. Fa ny kristiana dia afaka mifidy vanim-potoana manokana hankalazana ireo dingana lehibe amin'ny fiainana sy ny asan'i Jesosy.
Toy izany koa, ireo "Kristiana" andro iray isan-kerinandro amin'ny fotoam-pivavahan'izy ireo iraisana: mivory ho tenan'i Kristy izy ireo hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny ankamaroan'ny kristiana dia misafidy ny alahady ho an'ny fanompoana, ny hafa misafidy ny asabotsy, ary misy vitsivitsy miangona amin'ny fotoana hafa - ohatra ny alarobia hariva.
Ny fampianaran'ny Adventista mitandrina ny andro fahafito dia ny fahitana fa ny Kristiana dia manota raha misafidy ny alahady ho toy ny fotoam-pivavahany fatratra amin'ny fotoam-pivavahany izany. Tsy misy fanohanana anefa izany ao amin'ny Baiboly.
Zava-dehibe lehibe nitranga tamin'ny alahady Betsaka ny Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito mety ho gaga, fa ny Filazantsara dia milaza mazava tsara ny fisehoan-javatra lehibe nitranga tamin'ny alahady. Hiditra amin'ny antsipiriany kokoa isika: tsy voatery hanao ny fanompoana ny alahady ny kristiana, fa tsy misy antony tsy hisafidianana ny alahady ho amin'ny fotoam-pivavahana.
Ny Filazantsaran’i Jaona dia mitatitra fa nivory ny mpianatr’i Jesosy ny alahady voalohany taorian’ny nanomboana an’i Jesosy tamin’ny hazo fijaliana ary niseho tamin’izy ireo i Jesosy (Jaona 20,1:2). Milaza hatrany ny Filazantsara efatra fa ny alahady vao maraina no hita ny nitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty8,1; Marka 16,2; Lioka 24,1; Jaona 20,1).
Ireo evanjelistra efatra dia nihevitra ho zava-dehibe ny manamarika fa nitranga tokoa ireo fotoana niseho ireo, izany hoe tamin'ny alahady. Azon'izy ireo natao tsy nisy antsipiriany, saingy tsy izany. Ny Filazantsara dia mampiseho fa i Jesosy dia nanangana ny tenany tamin'ny maty tamin'ny alahady - voalohany amin'ny maraina, avy eo antoandro ary tamin'ny hariva. Raha jerena ireo fisehoan-javatra tamin'ny alahady ireo dia natsangana tamin'ny maty i Jesosy, dia tsy natahotra na natahotra mihitsy ireo evanjelistra; Fa kosa, te-hanazava tsara izy ireo fa tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro no nitrangan'izany rehetra izany.
Ny lalana mankany Emmaus
Na iza na iza mbola misalasala ny amin’ny andro nitrangan’ny fitsanganana amin’ny maty, dia tokony hamaky ny fitantarana tsy azo lavina momba ireo “mpianatr’i Emmaus” roa ao amin’ny Filazantsaran’i Lioka. Efa nilaza i Jesosy fa hitsangana amin’ny maty “amin’ny andro fahatelo” (Lio 9,22; 18,33; 24,7).
Milaza mazava i Lioka fa io alahady io — ilay andro nahitan’ireo vehivavy ny fasan’i Jesosy foana — dia “andro fahatelo” tokoa. Nomarihiny manokana fa noraketin’ireo vehivavy ny fitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty ny alahady maraina4,1-6) fa ny mpianatra “tamin’izany andro izany” (Lioka 24,13) nankany Emaosy ary “andro fahatelo” izany (Lioka 24,21) no andro nilazan’i Jesosy fa hitsangana amin’ny maty Izy (Lioka 24,7).
Te-haka sary an-tsaina ny zava-misy manan-danja sasany nambaran'ny evanjelistra taminay izahay ny alahady voalohany taorian'ny nanomboana an'i Jesosy:
Natsangana tamin’ny maty i Jesoa (Lioka 24,1- faha-8. 13. 21).
Nahafantatra an’i Jesosy rehefa “namaky ny mofo” Izy (Lioka 24,30-31. 34-35).
Nihaona ny mpianatra ary nanatona azy ireo Jesosy (Lioka 24,15. 36; Jaona 20,1. 19). Nitatitra i Jaona fa nivory koa ny mpianatra tamin’ny Alahady faharoa taorian’ny fanomboana ary “niditra teo afovoany” indray i Jesosy (Jaona 20,26).
Tamin'ny fiangonana voalohany
Araka ny tatitry ny Lioka ao amin’ny Asan’ny Apostoly 20,7 , Paoly dia nitory tamin’ireo mpiangona tao Troasy izay nivory tamin’ny alahady mba “hampaha mofo”. ao amin'ny 1. Korintiana 16,2 Nitaky ny fiangonana tany Korinto sy ny fiangonana tany Galatia i Paoly (16,1) mba hanao fanomezana isaky ny alahady ho an’ny vondrom-piarahamonina noana any Jerosalema.
Tsy milaza i Paoly fa tokony hivory ny fiangonana ny alahady. Saingy ny fangatahany dia manondro fa tsy mahazatra ny fivoriana alahady. Anisan’ny anton’ny fanomezana isan-kerinandro, hoy izy, “mba tsy rehefa tonga aho ny fanangonana” (1. Korintiana 16,2). Raha tsy nanao ny fanomezana tany am-pivoriana isan-kerinandro ireo mpiangona, fa napetrany tao an-trano ny vola, dia mbola ho nilaina ny fanangonana rehefa tonga ny apostoly Paoly.
Mamaky ho azy ireo andalan-teny ireo, hany ka takatsika fa tsy mahazatra ny Kristianina ny mivory ny alahady, ary tsy mahazatra azy ireo koa ny “namaky ny mofo” miaraka amin’ny fivorian’ny Alahady (teny iray nampiasain’i Paoly niaraka tamin’ny tenin’ny Tompo. Mampifandray ny sakafo hariva; jereo 1. Korintiana 10,16- iray).
Ka hitantsika fa ireo evanjelistra vaovao ao amin'ny Testamenta Vaovao dia te hilaza amintsika fa nitsangana tamin'ny alahady Jesosy. Tsy nanana ahiahy koa izy ireo raha farafaharatsiny mba nanangona ny mofo ny sasany nahatoky tamin'ny alahady. Ny Kristiana dia tsy nomena toromarika manokana hivory hiatrika fanompoana amin'ny alahady, fa raha aseho ireo ohatra ireo, dia tsy misy antony tokony hananana fepetra amin'izany.
Loza mety hitranga
Araka ny voalaza etsy ambony dia misy antony marim-pototra azon'ny kristiana hiangona amin'ny alahady ho toy ny vatan'i Kristy hankalazana ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Tokony hifidy ny alahady ho andron'ny fiangonana ve ny kristiana? No. Ny finoana kristiana dia tsy miorina amin'ny andro sasany, fa amin'ny finoana an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany.
Tsy mety raha toa ka te-hanolo ny andiany iray amin'ny fialantsasatra fotsiny ianao. Ny finoana kristiana sy ny fanompoam-pivavahana dia tsy momba ny andro efa voatondro, fa momba ny fahalalana sy fitiavana an'Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika sy Mpanavotra antsika.
Rehefa manapa-kevitra isika hoe rahoviana isika no te hihaona amin'ny mpino hafa mba hivavaka, dia tokony handray fanapahan-kevitra isika amin'ny antony tsara. Ny antson'i Jesosy «Raiso, hano; izany ny tenako ”ary ny" misotro azy rehetra "dia tsy mifatotra amin'ny andro manokana. Na izany aza, fomban-drazana ho an'ny Kristiana Jentilisa hatramin'ny niandohan'ny fiangonana voalohany mba hanangona ny alahady amin'ny fiarahana amin'i Kristy, satria ny alahady no andro nanehoan'i Jesosy ny tenany fa nitsangana tamin'ny maty.
Ny lalàna momba ny Sabata, sy ny lalàn'i Mosesy manontolo, dia nifarana tamin'ny fahafatesan'i Jesosy sy ny nitsanganany tamin'ny maty. Ny fifikirana aminy na ny famerenana azy io amin'ny endrika Sabata Alahady dia midika fa manalefaka ny fanambaran'Andriamanitra momba an'i Jesosy Kristy, izay fahatanterahan'ny fampanantenany rehetra.
Ny finoana izay takian'Andriamanitra hitandrina ny Sabata na manery azy ireo hankatò ny lalàn'i Mosesy dia midika fa isika kristiana dia tsy mahatsapa tanteraka ny fifaliana tian'Andriamanitra homena antsika ao amin'i Kristy. Tian'Andriamanitra hatoky ny asany famonjena isika ary hahita fiadanam-po sy fampiononana ao Aminy irery. Ao amin'ny fahasoavany ny famonjena sy ny fiainantsika.
Indraindray isika dia mahazo taratasy izay anoratan'ny mpanoratra ny tsy fahafantarany fa manontany ny fomba fijerintsika ny Sabata isan-kerinandro dia andro masin'Andriamanitra ho an'ny Kristiana. Nambaran'izy ireo fa na inona na inona holazain'ny olona iray dia hankatoaviny "Andriamanitra mihoatra noho ny olona".
Ny ezaka hanao ny zavatra heverina ho sitrapon’Andriamanitra dia tsy maintsy ekena; ny tena mamitaka dia izay tena tadiavin'Andriamanitra aminao. Ny finoan'ny Sabbatarians fa ny fankatoavana an'Andriamanitra dia midika fa ny fanamasinana ny Sabata isan-kerinandro dia mamaritra mazava izay fisafotofotoana sy hadisoana nateraky ny Sabbatarians teo amin'ireo kristiana tsy miraharaha.
Amin'ny lafiny iray, ny fampianarana Sabbatarian dia manambara fahatakarana tsy araka ny Baiboly ny dikan'ny hoe mankatò an'Andriamanitra, ary amin'ny lafiny iray koa, io fahatakarana ny fankatoavana io dia fepetra takiana amin'ny fanapahana ny maha-azo ekena ny fahatokisana kristiana. Ny vokatr'izany dia ny fisainana eritreritra mifanohitra - "isika manohitra ny hafa" - dia nivoatra, fahatakarana an Andriamanitra izay miteraka fisarahana eo amin'ny vatan'i Kristy satria ny iray dia mihevitra ny iray fa tsy maintsy mankatò baiko iray, araka ny fampianarana ao amin'ny Testamenta Vaovao, dia tsy manan-kery.
Ny fitandremana amim-pahatokiana ny Sabata isan-kerinandro dia tsy resaka fankatoavana an’Andriamanitra satria Andriamanitra dia tsy mitaky ny kristiana hitandrina ny Sabata isan-kerinandro. Milaza amintsika ny ho tia azy Andriamanitra, ary ny fitiavantsika an’Andriamanitra dia tsy voafaritra amin’ny fitandremana ny Sabata isan-kerinandro. Ny finoantsika an’i Jesoa Kristy sy ny fitiavantsika ny mpiara-belona amintsika no mamaritra izany (1. Johannes 3,21- enina ambin'ny folo; 4,19-21). Misy, hoy ny Baiboly, fa misy fanekena vaovao sy lalàna vaovao (Hebreo 7,12; 8,13; 9,15).
Diso amin'ny mpampianatra Kristiana ny mampiasa ny Sabata isan-kerinandro ho zaridainan'ny finoana Kristiana. Ny fotopampianarana izay ny lalàn'ny Sabata dia mifamatotra ho an'ny kristiana dia mametraka ny enta-mavesatra ny feon'ny fieritreretana kristiana miaraka amin'ny fahamarinana ara-dalàna manimba, manala ny fahamarinana sy ny herin'ny filazantsara ary mahatonga fisarahana eo amin'ny vatan'i Kristy.
Milaza ny Baiboly fa manantena ny olona hino sy ho tia ny filazantsara Andriamanitra (Jao 6,40; 1. Johannes 3,21- enina ambin'ny folo; 4,21; 5,2). Ny fifaliana lehibe indrindra azon’ny olona iainana dia ny fahafantarany sy ny fitiavany ny Tompony (Jaona 17,3), ary io fitiavana io dia tsy voafaritra na ampandrosoina amin’ny fitandremana andro voafaritra tsara amin’ny herinandro.
Ny fiainana Kristiana dia fiainana milamina ao anatin’ny fifalian’ny Mpamonjy, fitsaharana avy amin’Andriamanitra, fiainana izay atokana ho an’Andriamanitra ny lafiny rehetra amin’ny fiainana ary ny asa rehetra dia fanoloran-tena. Ny fametrahana ny fitandremana ny Sabata ho singa iray mamaritra ny Kristianisma “tena” dia mahatonga ny olona iray tsy hanadino ny fifaliana sy ny herin’ny fahamarinana fa tonga Kristy ary Andriamanitra ao aminy dia iray amin’izay rehetra mino ny vaovao tsara fanekena vaovao (Matio. 26,28; Hebreo
9,15), natsangana (Romana 1,16; 1. Johannes 5,1).
Ny Sabata isan-kerinandro dia aloka - famantarana - ny zava-misy ho avy (Kolosiana 2,16-17). Ny fitazonana an'io soso-kevitra io ho ilaina mandrakizay dia midika fa mandà ny fahamarinana fa efa misy sy misy io zava-misy io. Ny olona iray dia manaisotra ny fahafahana hiaina fifaliana tsy voazarazara momba ny tena zava-dehibe.
Toy ny tianao ny hanantona ilay fanambarana fampakaram-bady ataonao ary hankafizo rehefa vita ny fampakaram-bady. Fa kosa, fotoana izao no tokony hatao laharam-pahamehana amin'ny mpiara-miombon'antoka ary avelao ny dingana miditra amin'ny sehatra ho fahatsiarovana mahafinaritra.
Tsy ny toerana sy ny fotoana intsony no ifantohan’ny fanompoam-pivavahana ho an’ny olon’Andriamanitra. Ny fivavahana marina, hoy i Jesosy, dia amin’ny fanahy sy ny fahamarinana (Jao 4,21-26). Ny fo dia an'ny fanahy. Jesosy no fahamarinana.
Rehefa nanontaniana i Jesosy hoe: “Inona no tokony hataonay mba hanaovana ny asan’Andriamanitra?” Namaly izy hoe: “Asan’Andriamanitra ny hinoanareo Izay nirahiny.” (Jaona. 6,28-29). Izany no mahatonga ny fanompoam-pivavahana kristiana momba an’i Jesosy Kristy voalohany indrindra - momba ny maha-Zanak’Andriamanitra mandrakizay Azy sy momba ny asany amin’ny maha-Tompo sy Mpamonjy ary Mpampianatra Azy.
Andriamanitra no mampifaly kokoa?
Izay mino fa ny fanarahana ny lalàn'ny Sabata dia fambara izay mamaritra ny fanavotana na fanamelohana antsika amin'ny tsy fifanarahana farany - ny ota sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha ny Olomasin'ny Sabata no hany olona voavonjy, dia ny Sabata no fepetra ahafahana mitsara, fa tsy Zanak'Andriamanitra maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjena antsika.
Mino ny Sabbatarians fa Andriamanitra kokoa no mankasitraka kokoa izay manamasina ny Sabata noho ilay tsy manamasina azy. Tsy avy ao anaty Baiboly anefa izany. Ny Baiboly dia mampianatra fa ny Lalàn'ny Sabata, toa ny Lalàn'i Mosesy manontolo, dia natsangana ary natsangana ho any amin'ny haavo avo kokoa ao amin'i Jesosy Kristy.
Noho izany, raha mitandrina ny Sabata isika, dia tsy midika hoe "fahafinaretana lehibe" ho an'Andriamanitra. Ny sabata dia tsy nomena ny Kristianina. Ny singa manimba ao amin'ny teolojika Sabata dia ny fisisihan'izy ireo fa ny Sabbatariana no hany Kristiana marina sy mino, izay midika fa tsy ampy amin'ny ran'i Jesosy ny ran'i Jesosy raha tsy hoe manampy ny andro Sabata.
Ny Baiboly dia manohitra ny foto-pampianarana diso toy izany ao amin'ny andalan-teny manan-danja maro ao amin'ny soratra: ny fahasoavan'Andriamanitra no hanavotana antsika amin'ny finoana ny ran'i Kristy irery ihany, fa tsy amin'ny asa na inona na inona (Efesiana). 2,8-10; Romana 3,21- enina ambin'ny folo; 4,4- enina ambin'ny folo; 2. Timoty 1,9; TITOSY 3,4-8e). Ireny fanambarana mazava ireny fa i Kristy irery ihany fa tsy ny lalàna no tena manapa-kevitra ny amin’ny famonjena antsika dia mazava ho azy fa mifanohitra amin’ny fotopampianaran’ny Sabata hoe tsy afaka miaina ny famonjena ny olona tsy mitandrina ny Sabata.
Ny lehilahy Sabata antonony dia mino fa lehibe kokoa Andriamanitra noho ny olona izay tsy mitandrina ny andro sabata. Andao hojerentsika ireto fanambarana manaraka ireto avy amin'ny publication WKG teo aloha:
"Fa izay manohy mankatò ny baikon'Andriamanitra hitandrina ny Sabata ihany no hiditra amin'ny 'fitsaharany' be voninahitra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka hahazo ny fiainana fiainana mandrakizay" (Ambassador College Bible Correspondence Courts, lesona 27 amin'ny 58, 1964, 1967).
"Izay tsy mitandrina ny Sabata dia tsy hitondra ny 'mariky' ny Sabata masina, izay anamarihana ny olon'Andriamanitra, ary vokatr'izany dia TSY HATERAN'ANDRIAMANITRA rehefa hiverina i Kristy!" (ibid, 12).
Raha ny voalazan’ireto teny ireto dia ny fitandremana ny Sabata dia tsy vitan'ny hoe heverin'Andriamanitra, fa azo inoana koa fa tsy hisy olona ho voavonjy raha tsy ho masina ny andro sabata.
Ity teny manaraka ity avy amin'ny literatiora Adventista mitandrina ny andro fahafito:
“Ao anatin'ity adihevitra eskatôlôjika ity, ny fanompoam-pivavahana Alahady no tena mampiavaka azy, eto ny mariky ny bibidia. Nataon’i Satana ho tandindon’ny heriny ny Alahady, fa ny Sabata kosa no ho fitsapana lehibe ny amin’ny tsy fivadihana amin’Andriamanitra. Io resabe io dia hampisara-bazana ny Kristianisma ho toby roa ary hamaritra ny fotoan’ny fiafaran’ny fifanoherana ho an’ny vahoakan’Andriamanitra »(Don Neufeld, Encyclopedia Advantista Andro Fahafito, 2. Fanavaozana, Boky faha-3). Ity teny ity dia maneho ny finoan'ny Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito fa ny fitandremana ny Sabata no fepetra hanapahana hoe iza no tena mino an'Andriamanitra ary iza no tsy mino, hevitra iray izay avy amin'ny tsy fahatakarana fototra momba ny fampianaran'i Jesosy sy ny apostoly, hevitra iray izay mampiroborobo. toe-tsaina ambony ara-panahy.
Ny teolojika Sabbatarian dia mifanohitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy sy ny hafatra mazava momba ny Baiboly. Ny Lalàn'i Mosesy, anisan'izany ny lalàna momba ny Sabata, dia natao ho an'ny vahoakan'ny Isiraely fa tsy ho an'ny fiangonana Kristiana. Na dia tokony hahatsiaro tena ho afaka mivavaka amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro aza ny kristiana, tsy tokony hanao fahadisoana isika hino fa misy antony ara-baiboly hifidianana ny asabotsy ho andro fivoriambe amin'ny andro hafa.
Azontsika fintinina amin'ireto manaraka ireto ireto:
Mifanohitra amin'ny fampianarana ara-baiboly ny filazana fa ny Sabatan'ny andro fahafito dia mifamatotra amin'ny Kristiana.
Mifanohitra amin'ny fampianarana ara-baiboly ny milaza fa ankasitrahan'Andriamanitra kokoa ny olona izay manamasina ny Sabata noho ny tsy manao, dia amin'ny andro fahafito na sabata Sabata.
Mifanohitra amin'ny fampianarana ara-baiboly ny filazana fa ny andro iray ho toy ny andro fivoriambe dia masina kokoa na masina kokoa amin'ny vondrom-piangonana fa tsy amin'ny hafa.
Misy hetsika ivony ao amin'ny filazantsara izay nitranga tamin'ny alahady, ary io no fototry ny fomba amam-panao kristianina mba hiangona ho amin'izany andro izany.
Ny nitsanganan'i Jesosy Kristy, ilay Zanak'Andriamanitra, izay tonga ho fanavotana antsika, no fototry ny finoantsika. Noho izany, ny fanompoana ny alahady dia taratry ny finoantsika ny filazantsara. Saingy, ny fanompoana amin'ny fiaraha-monina amin'ny alahady dia tsy takiana, ary ny fanompoana amin'ny alahady dia mahatonga ny kristiana ho masina na tiana kokoa noho Andriamanitra mihoatra noho ny fivoriambe amin'ny andro hafa amin'ny herinandro.
Ny fotopampianarana izay ny Sabata dia mifamatotra amin'ny kristiana dia miteraka fahavoazana ara-panahy satria ny fampianarana tahaka izany dia mifanohitra amin'ny Soratra Masina ary manandanja ny firaisana sy ny fitiavana ao amin'ny vatan'i Kristy.
Manimba ara-panahy ny mino sy mampianatra fa ny kristiana dia tokony hivory na amin'ny asabotsy na amin'ny alahady satria ny fampianarana toy izany no manangana ny andro fiankohofana ho sakana ara-dalàna tokony handresena.
Nisy hevitra farany
Amin'ny maha mpanara-dia an'i Jesosy antsika, dia tokony hianatra ny tsy hitsara azy ireo isika amin'ny safidy ataontsika mifanaraka amin'ny feon'ny fieritreretantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ary mila manao ny marina amin'ny tenantsika isika mikasika ireo antony ao ambadiky ny fanapahan-kevitra raisintsika. Jesosy Kristy Tompo dia nitondra ny mpino ho amin'ny fitsaharany masina, amin'ny fiadanana miaraka aminy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra feno. Enga anie isika rehetra, araka ny tenin'i Jesosy, hitombo amin'ny fitiavana hatrany.